ShweMinThar: December 2012
1. ကျမ အသက် ၃၉ နှစ်ကျော်ပါရှင်
2. သမီးအသက်က ၂၇ ပါ။
3. ဆရာရှင့် ဖြစ်တာက ကျွန်မညီမပါ။
4. ကျွန်တော်တို့ အိမ်ထောင်ကျတာ ၇ လကျော်ပါပြီ။
5. Dr. I am now 16 years old and
6. သုံးလခံတားဆေးကို မထိုးခင် တရက်ကနေလိုက်မိပါတယ်။
7. ကျနော်နှင့်ကျနော့်အမျိုးသမီး ညနေက အတူနေမိမလိုဖြစ်သွားတယ်။
8. ဆရာ site ပေါ် မဖော်ပြစေချင်လို့ပါဆရာ။
9. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ အပြာစာအုပ်တွေမှာ
10. ကျွန်တော့်နာမည် ဦး (့) ပါ။ အသက်ကတော့ ၅၄ နှစ်ရှိပါပြီ။
11. သမီးအသက်က ၂၅ နှစ်ပါ။ ရန်ကုန်မှာနေပါတယ်။
12. အသက် ၃၄ နှစ် အပျိုပါ။
Sun, Dec 23, 2012 at 12:37 AM
ကျမ အသက် ၃၉ နှစ်ကျော်ပါရှင် ကျမဧ။်ညာဘက်သားဥအိမ်တွင် သွေးလုံးတည်နေတာ ၄.၅ cm ရှိနေပါတယ်။ ဆီးစပ်နှင့်ခါးလည်း အရမ်းကိုက်ပါတယ်။ ခွဲစိပ်ရင်ကောင်းမလား ဆေးသောက်ရင်ကောင်းမလား ဆိုတာ ဆရာအကြံပေးပါလားရှင်။ ဆရာကိုတစ်ခါမှမမေးဘူးတဲ့အတွက် အမှားရှိရင် ခွင်လွှတ်ပေးပါ။
Ovarian cyst ဆိုတာ ဆေးနဲ့တော့ မပျောက်ပါ။ ကြီးလာနိုင်တယ်။ တဖက်တည်းဖြစ်တာ တော်ပါသေးတယ်။ ကင်ဆာ မဟုတ်တာလဲ ကံကောင်းတယ်။ သွေးဖြစ်နေရင် များလာတဲ့အခါ ဖိအားသက်ရောက် တာ၊ ပေါက်တာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာ တတ်တယ်။ ခွဲစိတ်ထုတ်ပြစ်တာက အပန်းမကြီးပါ။ အိမ်ထောင်ရေး၊ ကလေး အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အကျိတ်သပ်သပ်သိုသာ ထုတ်ာနဲ့ မျိုးဥအိမ်တခုလုံး ထုတ်တာ ရွေးချယ်လေ့ ရှိပါတယ်။
Sun, Dec 23, 2012 at 7:16 PM
သမီးအသက်က ၂၇ ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အပျိုမြှေးက ဘယ်နားလောက်မှာရှိပါသလဲဆရာ။ မိန်းကလေး လမ်းကြောင်းရဲ့ အလယ်လောက်မှာ ရှိတာပါလား၊ အင်္ဂါ အဝမှာရှိတာပါလားဆရာ။ သမီး ချစ်သူနဲ့ တစ်ခေါက် ဆက်ဆံဖူးပါတယ်။ သူပြောတာတော့ အထဲမဝင်ဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် သွေးတွေတော့ ထွက်ပါတယ်ဆရာ။ အရမ်းနာလို့ ဆက်မလုပ်ဖြစ်ကြတော့တာပါ။ အဲ့ဒါ အမြှေးပါးပေါက်သွား တာလား။ နောက် တစ်ခုက လက်ညှိုးတစ်ချောင်းလောက် ထည့်ရင်ကော အဲ့ဒီအမြှေးပါးက ပေါက်တတ်ပါသလားဆရာ။
နောက်တစ်ခုသိချင်တာက သမီးလွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်ကစပြီး ပါးစပ်အာခေါင်နံရံနှစ်ဖက်ကနေ အဖြူဖက်တွေ ထွက်ပါတယ်။ အမှန်က ခုလုခုလု ဖြစ်နေလို့ကြည့်လို့တွေ့တာပါ။ အဲ့ဒါတွေကို လက်နဲ့ ကလော် ထုတ်ရပါတယ်။ နာကျင်တာတွေဘာတွေ ဘာမှမရှိပါဘူး။ ဆေးခန်းလဲပြကြည့်ပါတယ်။ ခံတွင်းကင်ဆာတို့ ဘာတို့ဖြစ်မှာ စိုးလို့ပါ။ ဆရာဝန်က ဘာမှမဖြစ်ဘူးပါဘူးတဲ့။ သမီးကအရင်က အာသီး ခဏခဏ ရောင်ဖူး ပါတယ်။ အာသီးရောင်ပြီး ဆေးထိုးပြီးမှ အဲ့ဒီအဖြူဖက်ထွက်တာပါ။ အခုတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ အဖြူဖက်တွေက ထွက်ထွက်နေတုန်းပဲမို့ပါ။ အဲ့ဒါ ဘာများဖြစ်တာပါလဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
အပျိုမြှေးဆိုတာ မိန်မအင်္ဂါ အဝမှာသာ ရှိတယ်။ အပြင်ဆုံးနေရာရဲ့ အတွင်းလောက်မှာ နဲနဲလေးသာ နက်တဲ့နေရာမှာပါ။ သွေးထွက်တာက အဲဒါစုတ်ပြဲသွားတာ ဖြစ်ပါမယ်။ တခြားကနေ သွေးထွက်စရာဆိုလို့ ရာသီလာတာဘဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လက်ချောင်းလေးတချောင်း ဝင်သာယုံဆိုတာတော့ ပြောမရသေးပါ။ မေးတဲ့သူမှာ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် သိတာဘဲ။ အထဲဝင်တာ မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ လက်တချောင်းစာသာ ကျယ်ချင်ကျယ်နေမယ်။ တကယ်တော့ လိင်ဆက်ဆံဖူးသူ ဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လား။ လက်တချောင်းဆိုတာလဲ အဝနေရာမှာသာ မှန်တယ်။ အထဲရောက်ရင် အချောင်ကြီးလို့ ပြောနိုင်တယ်။ (ဆောရီး)။
လက်ညှိုးတချောင်းထည့်ရင် ပေါက်မလားဆိုတာလဲ မတူကြဘူး။ တချို့က အစကတည်းက သိပ်ကျဉ်းနေတယ်။ တချို့က တခြားအကြောင်းတခုခုကြောင့် နဲနဲကျယ်နေတယ်။ တချို့က ကျဉ်းတာသာမက ထူနေတတ်တယ်။ တချို့မှာ အပေါက် လုံးဝမပါဘူး။
အပျိုစစ်စစ်တွေလဲ အဲလိုဘဲ။ အပျိုစစ်ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာလဲ ဆရာရေးထားပါတယ်။ ပါးစပ်အဖြူဖတ်ဆိုတာ မှိုဖြစ်နိုင်တယ်။ အလိုလိုပျောက်တာများတယ်။ လိုအပ်ရင်တော့ မှိုဆေးသောက်ရတယ်။ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးမှာ ဆားနည်ကကောင်းတယ်။
Mon, Dec 24, 2012 at 11:00 AM
ဆရာရှင့် ဖြစ်တာက ကျွန်မညီမပါ။ သူမက အသက် 25 ပါ။ ရည်စားနဲ့ လွန်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူမရဲ့ အပျိုဘ၀ ပေးလိုက်မိပါတယ်တဲ့။ ကောင်လေးနဲ့နေတုန်း သုတ်တော့ မကျန်ခဲ့ဘူးပြောပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ ကျန်နိုင်တယ်လည်းပြောပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်က အတူနေမိတာလို့ ပြောပါတယ်။ သူက အခုကလေး ရမှာကြောက်နေပါတယ် ဆရာ။ ဆေးလည်း မစားထားဘူးပြောပါတယ်။ သတ်သေမယ်လို့လည်း ပြောနေ ပါတယ်။ သမီး အခုသူ့ကို ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ အိမ်ကလည်း သူမကို တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ပေးစားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်လုပ်ရမလဲဆရာ။ သူမ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်လားဟင်။ ဘာဆေးကျွေးရမလဲဆရာ။
http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/ ထဲက အောက်ဆုံးမှာ မာတိကာရှိတယ်။ သိချင်တာ ရှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Mon, Dec 24, 2012 at 8:25 PM
ကျွန်တော်တို့ အိမ်ထောင်ကျတာ ၇ လကျော်ပါပြီ။ ပထမဆုံးတော့ ၃ လဆေးထိုးပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အမျိုးသမီးမှာ ခေါင်းမူးခါးကိုက်နဲ့ မကြာခန ဖျားခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အရ တစ်လဆေးကဒ်ကိုပဲ အားဆေးနဲ့ တွဲပြီးသုံးပါတယ်။ အမျိုးသမီးက ရာသီလာချိန်ဆိုလည်း မခံမရပ်နိုင်အောင်ကိုက်ခဲတတ်ပါတယ်။ အပျိုဘဝထဲကပါ။ ခုနောက်ဆုံးရာသီလာချိန်မှာလဲ မခံမရပ်နိုင်အောင်ကိုက်ပြီး လာတော့လည်း တစ်စက်နှစ်စက်လောက်ပါပဲ။ ဒါ့အပြင် အသားစလို အစလေးများ ကျလာပါတယ်။ တစ်လက်မအရွယ်လောက်အထိ အသားစလေးများပါလာပါသဖြင့် စိုးရိမ်ရပါသလားသိချင်ပါတယ်ဆရာ။
ရာသီလာတုံးနာရင်၊ ဆင်းတာများရင်၊ တနေ့ ၁ ပြားသောက်ပြီး၊ တလမှာ ၂၁-၂၈ ရက်နေ့တိုင်းသောက်ရတဲ့ တားဆေးကပ်ကို ပေးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် နာတတ်တာ သက်သာလာပါလိမ့်မယ်။ ဆေးကပ် အမျိုးအစား ပြောင်းချင်ပြောင်ရနိုင်တယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ ဆင်းတာထဲမှာ ဘယ်လိုအရာပါနေနေ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ အခဲလိုဟာ ဆင်းခါနီးရင် ဗိုက်ရစ်နာနိုင်တယ်။ အနာ-အကိုက် ပျောက်ဆေး သောက်ရပါမယ်။ အစာနဲ့တွဲသောက်ပါ။ ရေနွေးအိတ်ကပ်ပါ။
Mon, Dec 24, 2012 at 9:29 PM
Dr. I am now 16 years old and I want to know about sex and pregnancy. Please write me back in Burmese.
You are under-age. I write on reproductive health and relationship issues in Burmese but only for over 18 readers.
အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ ဆေးပညာစာများ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/
Tue, Dec 25, 2012 at 1:46 PM
သုံးလခံတားဆေးကို မထိုးခင် တရက်ကနေလိုက်မိပါတယ်။ အဲဒါကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ပါသလား။ esse2 သောက်ပြီး တာဆေးထိုးလို့ရပါသလား။
အတူနေတဲ့အချိန်မှာ မိန်းကလေးက ရာသီရက်ဘယ်လောက်မှာရောက်နေတာ သိမှ ကိုယ်ဝန်ရ-မရ ပြောနိုင်တယ်။ အရေးပေါ်တားဆေး သောက်ပြီး ထိုးလို့တော့ရပါတယ်။ ကောင်းတာက ရာသီလာ (သွေးဆင်းတာ) သိရမှ ထိုးသင့်တယ်။ ဒါတောင် ၃ လခံဆေးထိုးပြီး ၅-၇ ရက်အထိ စိတ်မချရသေးပါ။ အကာကွယ်သုံးသင့်တယ်။
Tue, Dec 25, 2012 at 9:50 PM
ကျနော်နှင့်ကျနော့်အမျိုးသမီး ညနေက အတူနေမိမလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဒီလိုပါ နေမိမလိုဆိုတာက ကျနော်တို့ နေဖြစ်တိုင်း ကွန်ဒုံးသုံးတယ်ခဗျ။ သို့ပေမယ့် ညနေက နားနဲ့မနာဖ၀ါးနဲ့နာ နေမလိုဖြစ်တုန်း ကွန်ဒုံး မရှိတာသိလိုက်တော့ မနေလိုက်တော့ဘူး။ ကျနော် ၂ချက်လောက်တော့ အမျိုးသမီးထဲကိုဝင်သွားသေးတယ် မပြီးလည်းမပြီးပါဘူး ဇာတ်သ်ိမ်းခန်းတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ဖြေလိုက်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အမျိုးသမီး ရာသီပေါ်တာ ၁၃ရက်နေ့ကဆရာ။ သူကတော့ သူ့ဟာသူတွက်ချက်ပြီး မျိုးဥကြွေချိန်တွေ ဘာညာ ပြောနေတော့ စိတ်ပူနေလို့ပါ။ ကျနော်ကတော့ အရေးပေါ်ဆေးတွေလည်း မသုံးချင်ဘူး ဆရာ။ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေလည်း ဆရာ့ဆိုဒ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးနေတော့ စိုးရိမ်ပါတယ်။ တခြားဘယ်လိုနည်းနဲ့ တားလို့ရဦးမလဲသိချင်ပါခဗျ။ သို့ပေမယ့် ဒီလိုလေးလောက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်များ ကပ်သွားနိုင်သလားလည်း ကျနော် တို့နှစ်ယောက် စဉ်းစားအဖြေမထွက်လို့ ကူညီအကြံဥာဏ်ပေးပါဦးဗျာ
ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် ကိုယ်ဝန်မရဘို့ အတော်များပါတယ်။ ရာခိုင်နှုန်းတော့ ၁ဝဝ% မပြည့်ပါ။ သုက်ရည်အပြင်ထုတ်နည်းကနေ ၁၈% ရနိုင်တယ်။ ကိုယ်က ၉၂%ထဲမှာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ အရေးပေါ် တားနည်းနဲ့ တားဆေး ၂ မျိုးရှိတယ်။ တားဆေးထဲမှာလဲ ဆေးတမျိုးမကရှိတယ်။ ဆေးတိုင်းမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတော့ ရှိတယ်။ တားနည်းက သားအိမ်ထဲ ကောပါးတီ ထည့်ရတယ်။ ဆေးလိုတော့ ပျို့-အန်တာမဖြစ်ပါ။
Wed, Dec 26, 2012 at 2:33 PM ဆရာရှင့် ဆီးစစ်ကြည့်တော့လည်း မျဉ်းတကြောင်းဘဲပြပါတယ်။ အဲ့ဒါ မနက်ဖြန် ဆေးကဒ် အသစ်သောက်သင့် မသောက်သင့် မေးတာဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် mail ဘဲပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဆရာ site ပေါ် မဖော်ပြစေချင်လို့ပါဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆရာ့ (ဆိုက်) မှာ ဘယ်အမေးကိုဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ကနေမေးတယ်ဆိုတာ မထည့်ပါ။
Thu, Dec 27, 2012 at 9:58 AM
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ အပြာစာအုပ်တွေမှာ နန်းလုံးကြိုင်အမြစ်နဲ့ဆန်ဆေးရည်ကို သွေးပြီးလိမ်းရင် ယောက်ျားအင်္ဂါ ကြီးထွားတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားဆရာ။ သူ့မှာ ဆိုးကျိုးတွေကော ရှိပါသလားဆရာ။ ကြီးတာသေးတာဟာ အဓိကမဟုတ်ဖူး ဆိုပေမယ့်လည်း တူတူတန်တန်တော့ ဖြစ်ချင်တာပေါ့ဆရာရယ်။
မြန်မာဆေး၊ တိုင်းရင်းဆေးတွေကို ကျွန်တော်တို့လိုဆရာဝန်တွေက သိပ်မသိကြပါ။ အမြစ်ကိုသွေးလမ်းတာဟာ သောက်တာ၊ ထိုးတာတွေထက် ဘေးထွက်ဖြစ်စရာ နည်းပါမယ်။ သုတေသနမရှိတဲ့ နည်းတွေ ထဲက ဆေးထိုးတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ဘူးလို့ သတိပေးပါတယ်။ ဆေးလိမ်းတာမှာ အခုမေးတဲ့နည်းကို အရင်က မြန်မာတွေသုံးတာကိုသိပါတယ်။ ဒီနည်းသုံးလို့ ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုပြီး မေးလာတာတော့ မတွေ့ ဘူးသေးပါ။ ဆေးထိုးလို့ ဖြစ်တာတွေတော့ မေးကြတာရှိပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေသိတာတချို့ရေးထားတာကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Thu, Dec 27, 2012 at 2:53 PM
ကျွန်တော့်နာမည် ဦး (့) ပါ။ အသက်ကတော့ ၅၄ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော် ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သလို ခံစားနေရပါတယ်။ ထင်တာကတော့ ဆီးကြိတ်ရောင်တာ၊ ကြီးတာ လို့ ထင်တယ်။ ဆရာဝန်တွေဘာတွေတော့ မပြကြည့်ရသေးဘူး။ ကင်ဆာတွေဘာတွေ ဖြစ်နေမှာလည်းစိုးရိမ်လို့ မေးကြည့်ရတာပါ။ အသက်က ရလာပြီဆိုတော့ ဘယ်မှလည်း မသွားဖြစ်ဘူး။ ကျွန်တော် သိသလောက်တော့ ဆီးကျန်တာပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကြံဥာဏ်ပေးပါဦး။ အဲဒီလိုရောဂါအကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်လို့ ဖြေပေးပါဦး။
BPH ခေါ်တဲ့ ယောက်ျား ဆီးကျိတ်ကြီးတာ ဖြစ်ဘို့များပါတယ်။ ဆီးကုန်အောင်မသွားနိုင်တာဘဲ ခံစားရအုံးမယ်။ ကင်ဆာအတွက် မစိုးရိမ်ပါနဲ့အုံး။ သေချာအောင် ဆီးလမ်းအထူးကုဆရာဝန်ကိုပြသင့်ပါတယ်။ သိပ်ကြီးလာရင် အချိန်မတော် ဆီးလုံးဝမထွက်နိုင်ဘဲ အရေးပေါ်ဖြစ်တတ်တယ်။
Thu, Dec 27, 2012 at 4:24 PM
သမီးအသက်က ၂၅ နှစ်ပါ။ ရန်ကုန်မှာနေပါတယ်။ သမီး ၁၁ လပိုင်းက သအိမ်ခြစ်ထားပါတယ်။ ဆေးရုံမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး ခြစ်ပြီးနောက် သွေးတွေလာပါတယ် ၂ ကြိမ်ပါ ကုန်သလောက်နီးပါးဆင်းပါတယ်။ တစ်ကြိမ်လာရင်လဲ ၄ ရက် ၅ရက်လောက် လာပါတယ်။ ခုဒီလမှာလဲ ၂ ကြိမ်လာနေပါတယ်။ သွေးကတော့ မဲမနေပါဘူး နံလဲမနံပါဘူး ။ ခဏခဏလာတော့ နဲနဲစိတ်ပူလာလို့ပါ။ ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာ အကြံပေးပါအုန်း ဆရာ....
သားအိမ်မခြစ်ခင်က ရာသီ ဘယ်လောက်ကြာအောင်ထိန်သလဲ မသိပါ။ ဆင်းစရာကုန်အောင်ဆင်းပါလိမ့်မယ်။ နောက်တခါ ကိုယ်ဝန်မယူချင်သေးရင် တားဆေး၊ တားနည်း စနစ်တကျသုံးသင့်ပါတယ်။ သားအိမ်ကို ခဏခဏခြစ်ရတာ မကောင်းလှပါ။ သွေးအားကောင်းဆေး (သံဓါတ်) ဆေး သောက်သင့်ပါတယ်။
Thu, Dec 27, 2012 at 12:04 PM
အသက် ၃၄ နှစ် အပျိုပါ။ ရာသီစလာထဲက ဗိုက်က အရမ်းအောင့်ပါတယ်၊ စစလာခြင်းတရက်ပါဘဲ၊ Postan 500 (Mefenamic Acid 500 mg) သောက်ရင်ကောင်းသွားရော၊ နောက်ရက်တွေဆို မနာတော့ပါဘူး ဆရာ၊ အခုနောက်ပိုင်းကြတော့ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ ရာသီလာတဲ့ ၄ ရက်လုံး မခံမရပ်နိုင်အောင် ဗိုက်အောင့်အောင့်ပြီး အရမ်းလာပြီး ဆေးသောက်လို့လဲမရ၊ သွေးပေါင်တွေ လဲကျပြီးတော့ ၃-၄ ရက်လုံး မလှုပ်နိုင်ပဲ အိပ်ရာထဲလဲနေရတာ့ ရာသီလာမှာတောင် အရမ်းကိုကြောက်နေပါတယ်။ ၃ လလုံး အဲ့လိုပဲဖြစ်နေတော့ ဆေးခန်းသွားပြပြီး Ultrasound ရိုက်လိုက်တာ၊ အလုံး ၂ လုံတွေ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။
-A submucous fibroid measures 2.2cm
Lt culs - A multiloculated cyst (6.7*6.1) cm with internal echoes is noted
Rt ovary is normal in size & appearance.
POD - clear
-Liver, spleen, pancreas - Normal in size & echotexture.
-Kidneys & bladder - Normal.
(1) Submucous fibroid
(2) Lt endometriotic cyst
အခု Mervelon 28 ကို နံပါတ် ၂၁ အထိ ၆လ သောက်ခိုင်းပါတယ်။ (အောက်ဆုံးက ဆေးသေးသေးလေတွေ (နံပါတ် ၂၂-၂၈) ကို မသောက်ခိုင်းပါဘူး။) ၆ လပြည့်လို့ Ultrasound ပြန်ရိုက်ကြည့်လို့ ကောင်းရင် လဲကောင်းသွားမယ် မကောင်းပဲ ပိုကြီးလာရင်တော့ ခွဲရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခုဆေးသောက်တာ ၂ လရှိပါပြီ။ ဆေးသောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ရာသီတော့ မလာတော့ပါဘူး၊ ရာသီမလာဘူးဆိုတော့ အရမ်းကိုပျော် ပါတယ်။ လူလဲသက်သာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတကိုယ်လုံး တက်တက်ကြွကြွမရှိပဲ မလှုပ်ချင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါသတွေလဲ အရမ်းထွက်ပြီး တခုခုပြောရင် ပြန်ပြန်အော်နေလို့ပါ။ အရင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဆံပင်တွေလဲ အရမ်းကျွတ်ပြီး ၀က်ခြံတွေလဲပေါက်ပါတယ် အဲ့ဒါ ဆေးရဲ့ side effect ကြောင့်ဖြစ်တာမလားဆရာ။
အိမ်ကိုပြောတော့လဲ အိမ်ကလူတွေက အဲ့လိုသာဖြစ်ရင် တားဆေးစားတဲ့ မိန်းကလေးတွေအကုန် အဲ့လိုတွေဖြစ်နေမှာပေါ့တဲ့။ အဲ့ဒီ side effect တွေ သက်သာအောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ။ ၀က်ခြံပျောက်ပြီး ဆံပင်ကျွတ်တာလဲရပ်အောင်ပေါ့။ အခုဆို သမီးရဲ့ ဗိုက်ကလဲပူလာပြီးတော့ ဆီးလဲသိပ်ပြီး မထိန်း ထားနိုင်ဘူး၊ တခါတလေဆို ဗိုက်က တဆစ်ဆစ်နဲ့ အောင့်ပါတယ်။ သမီးက အိမ်ထောင်ပြု့ဖို့ အစီစဉ်ရှိပါတယ် ကြာတော့ ကြာအုံးမှာပါ အဆင်မပြေသေးလို့ပါ၊ အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ ကလေးကောရနိုင်ပါသေးလားဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ရှင်။ ခုတလော အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ များလာလို့ပါ၊ သမီး သူငယ်ချင်း ၁ ယောက်လဲ အဲ့လိုမျိူးဖြစပါတယ် သူကတော့ ဆေးသောက်နေရင်းနဲ့မှာ ရာသီတွေအရမ်းလာလို့ ခွဲထုပ်လိုက် ပါတယ်။ နောက် အသိထဲက တယောက်က ပေါက်ထွက်သွားလို့တဲ့ ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်။ အဲ့လို သားအိမ်မှာ အလုံးဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အတွက် ဆောင်ရန် နဲ့ ရှောင်ရန်တွေကိုပါ ပြောပြ ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဆောရီး။ ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါပါ။ အခံရဆိုးတယ်။ ကံကောင်းတာက ကင်ဆာ မဟုတ်ပါ။ စိတ်တော့ မပျက်ပါနဲ့ ကုသရတာလဲ ခက်တယ်။ အချိန်ယူရတယ်။ အကျိတ်က ၂ မျိုးဖြစ်နေတယ်။ Fibroid ဆိုတာက သားအိမ် အကျိတ်။ ဒါက သိပ်စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ သေးလဲသေးသေးတယ်။ သားအိမ်အပြင်အဖုံးလွှာအောက်မှာဖြစ်လို့ ရာသီလာတာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာအတွက် မထူးစေပါ။ ဒါပေမဲ့ ကြီးလာနိုင်တယ်။ နောက်တခုက Lt endometriotic cyst အခုလိုခံစားနေရတာတွေကိုဖြစ်နေစေတာဖြစ်တယ်။ သားအိမ်ရောဂါတမျိုးဖြစ်တယ်။ စာတပုဒ်ရေးထားတာကို ပို့လိုက်ပါတယ်။ ပြနေတဲ့ သားဖွါး-မီးယပ်အထူးကုကနေ အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ပြုလို့တော့ ရပါတယ်။ ပုံမှန်လိုတော့ အဆင်ပြေချင်မှတော့ ပြေပါမယ်။ တချို့မျာ အတူနေရင် မနာသင့်ဘဲနာတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ လူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါ။
ယမုန်နာဆေးခန်း - အမေး အဖြေ (၁၀၄) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
ကချင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကို အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး သွားရောက် ကြည့်ရှု
HIV ဝေဒနာရှင်များကို အားပေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ကဗျာဘွဲ့မှူး
ကဗျာဘွဲ့မှူးက မြန်မာတိုင်းရင်းသား HIV ဝေဒနာရှင် အယောက် ၂ဝဝ ကျော်ကို အနီးကပ်သွားရောက် စောင့်ရှောက်အားပေးကာ မေတ္တာတရားပြခဲ့ သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
"၃ ရက်နေ့က ကျမ်းစာသင် ပေးတယ်။ သီချင်းတွေ သင်ပေးတယ်။ တရားတွေဟောတယ်။ သူတို့တွေနဲ့ အတူကစားတယ်။
သူတို့နဲ့အတူ ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင်နဲ့ မေတ္တာပြတယ်။ ဦးဆောင်တဲ့သူက မလေးရှားက ဆရာလှစိုင်း ပါ။ ပြီးတော့ UN ကလည်း ပါတယ်" လို့ ကဗျာဘွဲ့မှူးက ပြောပြပါတယ်။
မလေးရှားကို ရောက်ရောက်ချင်း ရောဂါသည်တွေကို တွေ့လိုက်ရ တဲ့အခါအမှာ ရောဂါခံစားနေရတဲ့ သူတွေလို့တောင် မထင်ရဘဲ ရုပ်ရည် ချောမောလျက် ရှိနေကြတာကိုတွေ့ရကြောင်း ကဗျာဘွဲ့မှူး က ပြောပါတယ်။
"မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ၊ ကချင်တိုင်းရင်းသား အကုန်လုံး ပါဝင်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုးသွားရတာ တအားကို ကုသိုလ်ရပါတယ်။ ဘုရား ရှိခိုးကျောင်းတွေ သွားကြတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်သမား တွေကများတော့ မနက် ၁နာရီ ထိုးမှာ ဘုရားကျောင်း တက်ကြတယ်။ အဲဒါကတော့ မေ့မရတဲ့ အမှတ်တရပါပဲ။ အခုလိုမျိုး တစ်နေ့လုံး တစ်ညလုံး ဘုရားရှိခိုးခဲ့ရတာ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ပါပဲ" လို့ ကဗျာဘွဲ့မှူးက ပြောပြပါတယ်။
အခုသွားရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်မှာ စိတ်ခံစားမှု တစ်ခုကိုရခဲ့ကြောင်း၊ အတူတူနွေးနွေး ထွေးထွေး နေခဲ့ကြတဲ့ နေ့ရက်တွေကို အမှတ်ရမိကြောင်း ပြောပါတယ်။
"တကယ်ဆိုရင် သူတို့တွေရဲ့ ကလေးတွေ တအားကို သနားဖို့ကောင်း ပါတယ်။ သူတို့ဘဝကို သူတို့အရှုံးပေး ထားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုမျိုးနဲ့ တစ်သက်လုံး အကောင်းအတိုင်းနေနိုင်တဲ့ သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဘာသာရေးတွေက အဓိက မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကက စိတ်ပါပဲလို့ ပြောခဲ့တယ်။ နောက်ဆိုရင် ကျွန်မလည်း ပရဟိတ လူမှုရေး အလုပ်တွေကို ပိုလုပ်တော့မယ်လို့ စိတ်ကူးမိလာတယ်။ အခုအသက်အရွယ်လည်း ရလာပြီ။ ဘုရားကလည်း လမ်းပြလာ တယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ။ လူမှုရေးကိစ္စ တွေကို ပိုလုပ်ချင်လာပြီ"လို့ ကဗျာဘွဲ့မှူးက ပြောပြပါတယ်။
ကဗျာဘွဲ့မှူးက မလေးရှားခရီး စဉ်ကို နိုဝင်ဘာ ၃ဝ ရက်နေ့က ထွက်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့က ပြန်ရောက် လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှာလည်း မလေးရှားနိုင်ငံကို ခုလိုပဲ ချစ်စမ်းမောင်တို့ အဖွဲ့၊ MYC လူငယ်အဖွဲ့နဲ့အတူ နှစ်ပတ်ကြာ ထပ်မံသွားရောက်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိနေကြာင်း ကဗျာဘွဲ့မှူးက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Popular Journal - HIV ဝေဒနာရှင်များကို အားပေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ကဗျာဘွဲ့မှူး
ကချင်ပြည်နယ်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဒဲရစ်မစ်ချယ်လ်နဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr W. Patrick Murphy တို့ဟာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်က သရက်တော သာဂရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းက စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည် စခန်းတွေနဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့က HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကို စောင့်ရှောက် ကုသပေးနေတဲ့ စင်တာတစ်ခုတို့ကို သွားရောက် ကြည့်ရှု အားပေးခဲ့ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှု အခြေအနေတွေကို လေ့လာသုံးသပ်နိုင်ဖို့နဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့ အသံတွေကို နားထောင်ဖို့ ပထမဆုံး အကြိမ် လာရောက်ရတာပါလို့ RFA ကို အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးက ပြောပါတယ်။ ဒါအပြင် အမေရိကန် အစိုးရအနေနဲ့လည်း စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အစိုးရတပ်တွေနဲ့ ကချင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ တိုက်ပွဲတွေ အမြန် အဆုံးသတ်စေလိုကြောင်းလဲ မစ္စတာဒဲရစ်မစ်ချယ်က ပြောပါတယ်။
အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးရဲ့ နှစ်ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အတွင်း ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ဝိုင်းမော်မြို့နယ် မိုင်းနားကျေးရွာက စိန့်ဂျိုးဇက် ရိုမန်ကက်သလစ်နဲ့ ကချင်နှစ်ချင်းအသင်းတော် ဘုရားကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း၊ ဝိုင်းမော် သာဂရ သရက်တော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းနဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့ ဂျန်မိုင်ကောင်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ Hope Center အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ/အေအိုင်ဒီအက်စ် စောင့်ရှောက် ကုသရေး ဌာနတို့ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး မြစ်ကြီးနား အခြေစိုက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ မနေ့ကတော့ ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နဲ့အတူ တိုင်ရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ (PCG) နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် HIV/AIDS ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေကို ကုသပေးနေတဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့ မိုင်းလားရပ်ကွက်က HOPE Center ကို သွားရောက်ပြီး ဝေဒနာသည်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံကာ အားပေးစကားပြောကြားခဲ့သလို ကချင်ပြည်နယ် အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေ ကိုလည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ် နဲ့ အဖွဲ့ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် မနေ့ ညနေပိုင်းက မြစ်ကြီးနားမြို့ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံကာ တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
သတင်း (RFA )
မြတ်လေးငုံ - ကချင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး သွားရောက် ကြည့်ရှု
ပြည့်တန်ဆာများ တရားဝင်လိုင်စင် ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟု အမျိုးသမီး လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦးပြော
ပြည့်တန်ဆာများကို တရားဝင် လိုင်စင်ထုတ်ပေးပြီး၊ စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားဆောင် ရွက်သွားမည်ဟု NLD ပြည်သူ့လွှတ်တာ် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ပြောသည်။ ''ပြည့်တန်ဆာ မရှိတဲ့ နိုင်ငံဆို တာမရှိပါဘူး၊ ပြည့်တန်ဆာဆိုတာ ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတည်းက ရှိတာပါ။ ပပျောက်အောင်လုပ်တယ် ဆိုတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပပျောက် အောင်လည်း လုပ်လို့မရပါဘူး''ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အများအပြားတွင် ပြည့်တန်ဆာနှင့်ပတ်သက်၍ တရား ဝင်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးပြီးစနစ် တကျဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေး ထားကြောင်း၊ ထိုသို့ တရားဝင်လိုင် စင်များချထားပေးပါက ၄င်းတို့ကို အခွန်ကောက်ခံကာ တိုင်းပြည်အတွက် အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများလည်း ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည့်တန်ဆာများကို တရားဝင် လိုင်စင်ချထားပေးနိုင်ရန် လွှတ်တော်၌ အဆိုပြုတင်သွင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
''လိုင်စင်ထုတ်ပေးရင်ကောင်း တာပေါ့။ အခုဆိုရင် ရဲကို ကြောက် နေရတယ်။ လိုင်းကြေးလည်း ပေးရသေးတယ်။ တကယ်ဖြစ်ရင်တော့ ကောင်းမှာလို့ မျှော်လင့်မိတယ်'' ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှ လိင်လုပ်သားတစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေသူ အမျိုးသမီး အများစုသည် အခြားအတတ်ပညာ များ တတ်မြောက်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ထွက်ပေါက်မရှိသည့်အတွက် ယင်း အလုပ်ကိုလုပ် ကိုင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ဆက်ပြောသည်။
''လိုင်စင် ထုတ်ပေးနိုင်ပြီ ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ ကူးစက် ရောဂါဆိုတာ Sexworker တွေက တစ်ဆင့် အများဆုံး ကူးစက်နေတာပါ။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ကူး စက်ရောဂါတွေ မဖြစ်နိုင်အောင်ကွန် ဒုံးသုံးရတယ်။ မသုံးရင် Sexworker ရောပျော်ပါးတဲ့ သူနှစ်ယောက်စ လုံးကို ပြစ်ဒဏ်ချမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေ ပြဌာန်းထားပါတယ်'' ဟု မင်္ဂလာတောင်ညွန့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းက ပြောသည်။
HIV/AIDS အပြင် အခြားကူးစက် ရောဂါများဖြစ်ပွား မှုနှုန်းနည်းစေရန် ကွန်ဒုံးသုံးစွဲသင့်ပြီး Sexworker များကိုလည်း ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများပုံမှန် ပြုလုပ်ကာ တရားဝင် လိုင်စင်များထုတ် ပေးသင့်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
Messenger News Journal - ပြည့်တန်ဆာများ တရားဝင်လိုင်စင် ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟု အမျိုးသမီးလွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦးပြော
Posted by Alex Aung at 10:12 PM No comments:
ပရိတ်တရားတော်တွေကို အမြဲမပြတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လို၊ တရားနာလိုသူတွေအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း၊Tabletတွေမှာပဲ အဆင်ပြေပြေ နာယူလို့ရမယ့် Application လေးတစ်ခုကို ဖော်ပြလိုပါတယ်။ ဒီ Application လေးက ပရိတ်တရားတော် တွေကို ကိုယ်တိုင်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်သလို ကိုယ်ရွတ်ဆိုတဲ့ ပရိတ်တရားတော်တွေရဲ့ အသံထွက် မမှန်မှာစိုးရိမ်နေသူ တွေအတွက်လည်းပရိတ်နာယူရင်း တစ်ခါတည်းအမှန်မြင်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို အသုံးပြုဖို့ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားဖို့ မလိုတဲ့အပြင် မြန်မာစာမသွင်းထားတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့Root လုပ်မထားတဲ့ဖုန်းတွေ မှာပါ မြန်မာစာလုံးတွေကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်မှာပါ။
ဒီ Application လေးရဲ့အမည်က MMHub ပရိတ်ဖြစ်ပြီး Android အမျိုးအစားဖုန်းနဲ့ Tablet တွေမှာ ထည့်သွင်းနိုင်မှာပါ။ ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး Androd Version 1.6 လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
http://www.mediafire.com/?fc71xwf89c1wb93 မှာ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်မှာပါ။
[Buddha Application: https://www.mediafire.com/file/nx63he6m5h3q4y3/]
ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်မယ့် Cooking Master
အစားအစာတွေကို ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ရပ် ရုပ်သံအစီအစဉ်မှာ အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်တာကို ကြည့်ရှုလေ့ရှိသူတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်တာကို ၀ါသနာပါသူတွေအတွက် မှာယူထားတဲ့ အစား
အစာတွေကို ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ပေးရတဲ့ Cooking Master ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်းလေးက ၀ယ်သူတွေလိုချင်တဲ့ အသား၊ အသီးအနှံနဲ့မုန့်တွေကိုမြန်မြန်နဲ့ မှန်မှန်ရောင်းပေးရမှာဖြစ်ပြီး Casual Mode နဲ့ Time Mode ဆိုပြီးအဆင့်နှစ်ဆင့်ပါတယ်။ Time Mode ကတော့ Casual Mode အဆင့်တွေအောင်ပြီးမှ ဆက်ကစား လို့ ရမှာပါ။ ဒီ Cooking Master ဆိုတဲ့ ဂိမ်းလေးကကစားရတာ လွယ်တယ်ထင်ရပေမယ့်အဆင့်တက်လာတာနဲ့ ၀ယ်သူ တွေ ကတစ်ယောကပြီးမှ တစ်ယောက်မှာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အကုန်လုံးတစ်ပြိုင်နက်ရောက်လာတာတို့၊ တစ်ယောက်တည်းက အမျိုးအစားမတူတာ နှစ်မျိုးမှာတာမျိုးတို့ လုပ်တာကြောင့် လက်မလည်အောင် ကစားရမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားလို့စမ်းသပ် ကစားချင်တယ် ဆိုရင် https://play.google.com/store/apps/details?id=com.master.cooking&hl=en နဲ့ 1Mobile Market မှာအခမဲ့ download ရယူနိုင်မှာပါ။
Photoshop မကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက် လိပ်စာကတ်ဒီဇိုင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လုပ်လို့ရမယ့် Software လေး တစ်ခု ကို ညွှန်ပြပေးချင်တယ်။ ဘယ်လောက်အထိ လွယ်လဲဆိုရင် အဲဒီ Software ကို ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ တစ်ခါတည်း ကိုယ့်လိပ်စာ ကိုယ့်နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ရုံပါပဲ။ Software ကိုအရင်ဆုံး Install လုပ်ပါ။ ပြီးရင်တစ်ခါတည်း Software က အလို အလျောက်ပွင့်သွားတာနဲ့ Business Card MX ဆိုတဲ့ Box တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ Box ကျလာရင်Recent Open ဆိုတဲ့ အောက်မှာ Defaultပါတဲ့ဟာလေးတွေ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကိုမှ မလိုချင်သေးရင် Open Template ဆိုတာကို ဖွင့်ပါ။ အဲဒါကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Folder လေးတွေသတ်သတ်စီနဲ့Template တွေကိုခွဲပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ-ကိုယ်က တိရစ္ဆာန် ဆေးကုဆရာဝန်ဆိုပါတော့။
Animals ဆိုတဲ့ Folder အောက်မှာသွားရှာရင် တိရစ္ဆာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေနဲ့ကတ်တွေ ကျလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို ရွေးမယ် ဆိုရင် ရွေးချင်တဲ့ အပေါ်မှာ Click နှိပ်ပေးပါ။ ပြီးရင်MOJOSOFT ဆိုတာက Defaultပါနေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို ပြောင်းချင်ရင် MOJOSOFT ဆိုတာကို ကလစ်တစ်ချက်ပေးပါ။ ပြီးရင် ညာဘက်ထောင့်က Text ဆိုတဲ့အောက်မှာ ကုမ္ပဏီ နာမည်ထည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ဆေးကုခန်းနာမည်ထည့်ပါ။ နှစ်သက်ရာတစ်ခုခုထည့်ပြီးတာနဲ့ အောက်မှာဆိုရင် အရောင်ချိန် တာတို့၊ ဆိုဒ်အသေးအကြီးပြောင်းတာတို့ကိုလည်း လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲလိုပဲ ကုမ္ပဏီလိပ်စာတို့၊ ဖုန်းနံပါတ်တို့ ပြောင်း ချင်ရင်လည်း ပြောင်းချင်တဲ့နေရာကို နှိပ်နှိပ်ပေးပြီးတော့ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး အဲဒီပုံကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင် တောင် Click ပေးပြီးတော့ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံကို ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။
ကဲ ဒါလောက်ဆိုရင် Business Card တစ်ခုရဖို့ Photoshop မကျွမ်းလည်း ဘယ်လောက်လွယ်လည်းဆိုတာကို သိ လောက်ပါပြီ။တကယ်လို့ စိတ်ဝင်စားလို့ပဲဖြစ် ဖြစ်၊ စမ်းချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Business Cards လုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
http://www.myanmarchatonline.org/index.php?topic=1277.0 မှာ Download လုပ်လို့ရနိုင်မှာပါ။
အသုံးဝင်တဲ့ Application မျိုးစုံရတဲ့ Mobile App Market
ကနေ့ခေတ်မှာ ဖုန်းတွေ၊ Tablet တွေ အသုံးများလာတဲ့နည်းတူFree Application မျိုးစုံရတဲ့ Android စနစ်
သုံးဖုန်းတွေလည်း လူကြိုက်များလာတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုပြောပြချင်တာကတော့ ဆော့ဝဲလ်တွေ၊ ဂိမ်း
တွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာတွေကိုFree Download ရယူနိုင်မယ့်အပြင် အဲဒီApplication တွေ၊ ဂိမ်းတွေအကြောင်း
ကိုလည်း မြန်မာလိုခပ်လွယ်လွယ်ဖတ်ရှုနိုင်မယ့် မြန်မာ Mobile App Market လေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက Android စနစ်သုံးဖုန်းတွေနဲ့ Tablet တွေမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာ
ကျွမ်းကျင်မှုမရှိလို့ တချို့အသုံးဝင်တဲ့Application တွေ၊ ဂိမ်းတွေကိုထည့်ရမလိုမထည့်ရမလိုဖြစ်ပြီး အခက်တွေ့ နေတာတွေ အဆင်ပြေစေမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း Root လုပ်ရတာမကြိုက်လို့ မြန်မာ Fonts မသွင်းထားတဲ့သူတွေအတွက် မြန်မာလိုဖတ်ရှုလို့ရတာမို့ အတော်အဆင်ပြေတဲ့ Application ဖြစ်ပါတယ်။ Application တွေမှာဆိုရင်လည်း အသုံးဝင်ဆော့ဝဲလ်များ၊ လုပ်ငန်းသုံးဆော့ဝဲလ်များ၊ ဖျောဖြေရေး၊ သင် ထောက်ကူဆော့ဝဲလ်များစသလို ခေါင်းစဉ် ကိုးမျိုးလောက် သီးသန့်ခွဲထားတာတွေ့ရပြီး အဲဒီထဲကမှ ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်မယ့် ဆော့ဝဲလ်ကိုရွေးချယ်Download ချနိုင်မှာပါ။
ဂိမ်းခေါင်းစဉ် အောက်မှာဆိုရင်လည်း စွန့်စားမှုဂိမ်း၊ ဥာဏ်စမ်းဂိမ်း၊သေနတ်ပစ်ဂိမ်း၊ အားကစားဂိမ်း စသလိုသီးသန့်စီထဲက ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်မှာမို့ ဖော်ပြပေးလိုက်တာပါ။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို ထည့်သွင်းဖို့ Android OS 2.1 နဲ့ အထက်လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားလို့ ထည့်သွင်းချင်ရင် http://myanmarmobileapp.com မှာ Free download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 11:26 AM No comments:
YKKO စတိုင် ကြေးအိုး (၄ယောက်စာ)
YKKO စတိုင် ကြေးအိုး ချစ်သူတွေအတွက် ၀က် ကြေးအိုး နဲ့ ကြေးအိုး ဆီချက် လုပ်နည်းလေးပါ။ အိမ်သားတွေကတော့ YKKO ကြေးအိုး အရသာ အတိုင်းပဲတဲ့။ YKKO ကြေးအိုးလို အချို ခပ်လေးလေးနဲ့ ချက်ထားတာပါ။ ကြေးအိုးမှာ အရေးကြီးဆုံးက ၀က်ရိုးပြုတ်ရည်ပါ။ ၀က်နံရိုးကို ပြုတ်ရင် ဆိုင်ကကြေးအိုးတွေနဲ့ အရသာ မတူတာမို့၊ ချဉ်ဆီ များတဲ့ ၀က်ဒူးဆစ်ရိုးကို အသုံးပြု ထားပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ဆောင်းအေးအေးလေးမှာ ကြေးအိုး ပူပူလေး သောက်ကြရအောင်…
ဆန်ကြာဇံ – ၁ထုပ် (ဇလုံတစ်ခုထဲတွင် ကြာဇံများကို ရေစိမ်ထားပေးပါ)
၀က်ဒူးဆစ်ရိုး – ၄ချောင်း (ဈေးတွင် ၀ယ်ယူနိုင်သည်)
၀က်အူ – ၁၀ကျပ်သား (၁လက်မခွဲအရွယ် လေးများ ပိုင်းဖြတ်ပါ)
၀က်သဲ – ၁၀ကျပ်သား (အရှည် လှီးထားပါ)
ပဲပြား – ၁တုံး (လက်မ၀က်အရွယ် လှီးပြီ တြိဂံပိုင်းဖြတ်ပါ)
ငုန်းဥ – ၁၀လုံး (ရေနွေးဖြင့် ကျက်အောင်ပြုတ်ပြီ အခွံနွှာထားပါ)
ကြက်သွန်မြိတ် – ၁စည်း ( ၁လက်မအရွယ် ပိုင်းဖြတ်ပါ)
မုန့်ညှင်းစိမ်း- ၂စည်း (ထက်ပိုင်းပိုင်းပါ)
ဟူစိုင် – ၁စည်း – (၁လက်မအရွယ် ပိုင်းဖြတ်ပါ)
ဆား – စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း
အချိုမှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
သကြား – စားပွဲတင်ဇွန်း ၆ဇွန်း
ရေ – ၁၀ လီတာ
နှမ်းဆီ – အနည်းငယ်
မှတ်ချက် ။ ။ Home made ကြေးအိုးလို အချို အလေး မစားသူများအတွက် အချိုမှုန့်၊ သကြား ထည့်ရမည့် ပမဏ တ၀က်မျှ လျှော့ထည့်ပါရန်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပိုညီညွှတ်ပါသည်။
၀က်သား – ၄၀ကျပ်သား (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ – ၄မွှာ (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
ဂျင်း – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
နှမ်းဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ကော်မှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ငါးဖယ် – ၁၀ကျပ်သား
ဂျင်း – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က် (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
ကြက်ဥ အကာ – ၁လုံး (ခလောက်ထားပါ)
ဂျုံ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၁။ အရင်ဆုံး ဒယ်အိုး အကြီး တစ်ခုထဲတွင် ၀က်ဒူးဆစ်ရိုးများကို ထည့်ပြီ ရေ ၁၀လီတာ ထည့်ကာ အဖုံးအုပ်ပြီ ၂နာရီခန့် တည်ထားပေးပါ။
၂။ ၀က်ဒူးဆစ်ရိုးများ ပြုတ်ထားစဉ် ၀က်သားလုံးရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သော (၀က်သား၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ ဆား၊ ပဲငံပြာရည်၊ နှမ်းဆီ၊ ကြက်ဥ၊ ကော်မှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်) တို့ကို ခွက်တစ်ခုထဲတွင် ထည့်ထားပါ။
၃။ ထို့နောက် သမအောင် ၀က်သားများကို ရောနုယ်လိုက်ပါ။
၄။ ပြီနောက် ငါးဖယ်လုံးရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော (ငါးဖယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ ကြက်ဥအကာ၊ ဂျုံ) တို့ကိုလည်း ခွက်တစ်ခုရောထည့်ပြီ သမအောင် ရောနယ်လိုက်ပါ။
၅။ ထို့နောက် ပုံတွင် ပါသည့်အတိုင်း ငါးဖယ်လုံးများကို လုံးပေးပါ။ ငါးဖယ်လုံး လုံးစဉ် လက်ကို ငါးဖယ်များ အကပ်စေရန် လက်ကို ဆီအနည်းငယ် သုတ်ပြီမှ လုံးပေးပါ။
၁။ ကြေးအိုး ပြုတ်ရည် တ၀က်ခန့်ခန်းသွားပြီ အနေတော်ပြီဆိုလျှင် ၀က်ရိုးများကို ပြန်ဆယ်ထားပါ။ ပြီမှ ပြုတ်ရည်ထဲသို့ ဆား(စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း)၊ သကြား(စားပွဲတင်ဇွန်း ၆ဇွန်း)၊ အချိုမှုန့်(စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း) ထည့်ပေးပါ။
၂။ အရသာ အပေါ့အငံ့မြည်းပြီ အနေတော်ပြီဆိုမှ ရေ(၁လီတာ) ထပ်ထည့်ပေးပါ။ ပြီမှ ၀က်အူများကို ကြေးအိုးပြုတ်ရည် ထဲသို့ ထည့်ပြီ ပြုတ်ပေးပါ။
၃။ ၀က်အူများ ကျက်ခါနီးမှ ငါးဖယ်များကို ထည့်ပေးပါ။ ထို့နောက် နုယ်ထားသော ၀က်သားများကို လက်တွင် ဆီအနည်းငယ် သုတ်ပြီ လက်ဖြင့် ဆုတ်ပြီ အရှည်လေးများ ပြုတ်ရည်ထဲ ထည့်ပေးပါ။
၄။ အသားများ ကျက်လာလျှင် ပြုတ်ရည်ပေါ်သို့ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အသားများ ပေါ်လာလာခြင်း မဆယ်သေးပဲ ခေတ္တတည်ထားပေးပါ။
၅။ ပြီမှ ဇကာဖြင့် အသားများကို ဆယ်ပြီ ခွက်တစ်ခုထဲ ထည့်ထားပါ။
၆။ ထို့နောက် အကျက်လွယ်သည့် ပဲပြား၊ ငုန်းဥ၊ ၀က်သဲတို့ကို ၁မိနစ်ခန့် ထည့်တည်ပြီ ဇကာဖြင့် ပြန်ဆယ်ထားပါ။
၇။ ကြေးအိုး တခွက်စာ ပြင်ဆင်လို့ရပါပြီ။ တစ်ယောက် ကြာဇံ၊ မုန့်ညှင်းရွက်၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ဟူစိုင်များကို ဇကာထဲထည့်ပြီ ကြေးအိုးပြုတ်ရည်ဖြင့် အနည်းငယ် စိမ်ပေးပြီ ပြန်ဆယ်ထားပါ။
၈။ ပြီမှ ခွက်တစ်ခုထဲတွင် ကြာဇံ၊ ၀က်သားလုံး၊ ငါးဖယ်၊ ပဲပြား၊ ငုန်းဥ၊ ၀က်အူ၊ ၀က်သဲ၊ မုန့်ညှင်း၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ဟူစိုင် စသည်တို့ကို ထည့်ပေးပြီ ကြေးအိုးပြုတ်ရည် ယောက်ချို ၁ခွက်ခွဲကို လောင်းထည့်လိုက်ပါ။
၉။ အပေါ်မှ နှမ်းဆီ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် အနည်းငယ် ဖြူးပေးပြီ အရသာရှိသော YKKO စတိုင် ကြေးအိုးကို သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ…
ကြေးအိုး ဆီချက် လုပ်နည်း
၁။ ကြေးအိုးဆီချက်အတွက် ခွက်တစ်ခုထဲတွင် ကြေးအိုးပြုတ်ရည်ထဲ စိမ်ပြီ ပြန်ဆယ်ထားသော ကြာဇံများကို ထည့်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီမှ ပဲငံပြာရည်(စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့်(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်)၊ အချိုမှုန့်(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်)၊ နှမ်းဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ၀က်ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း) တို့ဖြင့် သမအောင် ရောနုယ်လိုက်ပါ။
၃။ ထို့နောက် ၀က်သားလုံး၊ ငါးဖယ်လုံး၊ ငုန်းဥ၊ ပဲပြား၊ ၀က်အူ၊ ၀က်သဲ၊ မုန့်ညှင်းစိမ်း၊ ဟူစိုင်၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ဆီချက်တို့ကို ထည့်ပြီ ရောနုယ်ပေးပါ။
၄။ အရသာရှိသော ကြေးအိုးဆီချက်ကို ကြေးအိုးပြုတ်ရည် ပူပူလေးနှင့် တွဲဖက် သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…